Mala Socotaa In Afar Midib Oo Baasaboor (Passport) Ah Dunida Inteeda Badan Adeegsato (+Sawiro) - Hablaha Media Network
Mala Socotaa In Afar Midib Oo Baasaboor (Passport) Ah Dunida Inteeda Badan Adeegsato (+Sawiro)
HMN:- Inta badan dunida aan ku nool nahay dalalka ka jiraan waxay adeegsadaan midib ahaan afar Baasaboor (Passport) oo kala duwan waana arin soo jireen ah laakiin aan inta badan lagu baraarugsaneyn.
Hadaba waxaan fiirin doonaa Baasaboor (Passport) aduunyada iyo afarta midib oo ay u badan yihiin inay leeyihiin waana arin guud oo dunida ka dhaxeyso laakiin aan la is weydiinin badanaa:
1. Midibka Casaanka ah (Red Color Passports): Inta badan xiligaas casriga ah baasboor midibkiisa casaan yahay waxaa lagu yaqaan Britain sidoo kalena Midowga Yurub baasboorkooda waa casaan marka laga reebo dalka Croatia oo aan casaan adeegsanin ayagoo Middowga Yurub ka mid ah.
Sidoo kale dalalka Koonfur Ameerika sida Bolivia, Colombia, Ecuador iyo Peru baasboooradooda midibkooda waa casaan xigeen iyo dalka Switzerland oo baasboorkeeda midibkiisa u ekeysiisay calankeeda midibka uu leeyahay oo isugu jiro casaan iyo cadaan.
2. Midibka Buluuga ah (Blue Color Passports): Inta badan waxaa loo yaqaan dunida cusub waxaana adeegsadaan 15-ka mid ah dalalka Caribbean-ka ku yaalo, sidoo kale dhinaca Koonfur Ameerika waxaa midibkaan adeegsadaan dalalal ay ka mid yihiin Brazil, Argentina iyo Paraguay.
Laakiin baasboorka aduunyada ugu caansan ee midibka buluuga leh waxaa adeegsadaan Mareekanka, laakiin waxay midibka buluuga USA qaateen sanadii 1976.
3. Midibka Cagaarka ah (Green Color Passports): Inta badan dalalka Muslimiinta ah ayaa adeegsadaan baasboorka midibkiisa cagaarka yahay.
Tusaale ahaan dalalka Muslimiinta ee baasboor cagaar adeegsadaan waxaa ka mid ah Morocco, Saudi Arabia, iyo Pakistan.
Sidoo kale Niger iyo Senegal oo galbeedka Afrika ku yaalo iyo Mexico ay adeegsadaan baasboor midibkiisa cagaar yahay.
4. Midibka Maddoow-ga ah (Black Color Passports): Tiro ahaan ma badno dalalka adeegsadaan baasboor midibkiisa maddow yahay laakiin waxaan ka xusi karnaa inay adeegsadaan Botswana, Zambia, New Zealand iyo Thailand.
F.G: Warbixintaan waxaan kasoo xiganay wargeyska caanka ah The Mirror ee gudaha UK laga leeyahay, marka qaabka ay qoraalka u dhigeen ayaan usoo xiganay, mana sameyn karno baaritaan dheeraad ah, hadii aad aqriste awood u leedahay inaad sameysid baaritaan dheeraad waad nala wadaagi kartaa.